Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kufaarta Xabashida Itoobiya ayaa xalay ka dhacay goob 3km u jirta degmada Aadan Yabaal ee gobalka Shabeelada dhexe.
Dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo hoostaga degmooyinka Aadan Yabaal iyo Moqokori ee gobalada Shabeelada dhexe iyo Hiiraan.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka’iyadoona goobta dagaalka uu ka dhacay ay tahay goob aysan degniin dad shacab ah oo ku taala wadada isku xirta degmooyinka Moqokori iyo Aadan Yabaal.
Wararkii ugu dambeeyay ee saaka ayaa sheegaya in goobta xalay dagaalka culus uu ka dhacay ay soo gaartay diyaarad nooca Elecobtarka ah taasi oo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada tiro askar Itoobiyaan ah.
Degmada Aadan Yabaal ayaa waxaa wali ka ariminayo maamulka Islaamiga ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin’iyadoona been abuur uu noqday warar ay baahiyeen warbaahinta cadowga iyo kuwa dhex dhexaatka sheegta kaasi oo ahaa in ciidamada Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka dowlada ay qabsadeen degmada Aadan Yabaal ee gobalka Shabeelada dhexe.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 29-06-1437 Hijri.
Next: Bam Gacmeed Lagu Weeraray Saldhig Ciidan Oo Muqdisho Ku Yaala.